ESI MEPEE FAỊLỤ PARTY - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Esi mepee faịlụ PARTI
Ihe edere na nkebi nke ọzọ, n'ime ọtụtụ ndị ikpe, faịlụ adịghị ebudata site na ihe nchọgharị ma ọ bụ ibudata ndị nlekọta, nke a na-agaghị emeghere na mbụ. Ihe jikọrọ ha, gụọ n'okpuru ebe a.
Atụmatụ nke usoro mmeghe NKEBI
Ebe ọ bụ na nke a bụ usoro nke data agbakwunyere, site na nnukwu, faịlụ ndị dị na steeti dị otú a enweghị ike meghere. Ha aghaghị ibu ụzọ ebudata ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụghị usoro nbudata, iji chọpụta ebe mbido.
Software iji mepee faịlụ PARTI
Ọtụtụ mgbe, faịlụ na ndọtị a na - emepụta site na nchịkọta nchịkọta nke wuru n'ime nchọgharị Mozilla Firefox ma ọ bụ site na ngwọta dị iche dị ka Free Download Manager ma ọ bụ eMule. Dị ka iwu, NKỌKWỤKWỤKWỤKWỌ egosipụtara dị ka nbudata nbudata ọdịda: ma ọ bụ n'ihi njedebe nke njikọ Ịntanetị, ma ọ bụ n'ihi ihe nkesa, ma ọ bụ n'ihi nsogbu ndị nwere ike na PC.
N'ihi ya, n'ọtụtụ oge, ọ bụ naanị iji gbalịa ịmalitegharia nbudata na usoro ihe omume ma ọ bụ nke ọzọ - ụfọdụ ndị algorithms nchịkọta download ga-ewepụta ọdịnaya ha, ebe ọ bụ, na ọtụtụ akụkụ, ha na-akwado ịmaliteghachi.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ibudata amaliteghị
Ọ bụrụ na mmemme na-akọ na mmeghari ohuru agaghị ekwe omume, ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ dị ka ndị a.
Echichapụla faịlụ ahụ ị chọrọ ibudata na ihe nkesa ahụ. N'okwu a, ị nweghị nhọrọ ma chọọ ebe ọzọ ma budata ihe ọ bụla ọzọ.
Nsogbu njikọ njikọ Ịntanetị. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya, malite na ntọala na-ezighị ezi nke firewall na-agwụ na malfunctions nke router. N'ebe a ị ga-achọ ozi ndị a.
Gụkwuo: Ịbawanye ọsọ nke Ịntanetị na Windows
Na diski ebe ịchọrọ ibudata faịlụ ahụ, ọ bụ naanị ohere. Ihe ngwọta dịkwa mfe - ihichapụ data na-enweghị isi ma ọ bụ nyefee ya na disk ọzọ ma gbalịa ọzọ. I nwekwara ike gbalịa ime ka diski gị pụọ na faịlụ faịlụ.
Gụkwuo: Otu esi ehichapụ disk diski na Windows
Ngwá ọrụ PC. Ọ na-esikwa ike ịkọwapụta ebe a - enwere ike inwe nsogbu na diski ike ma ọ bụ SSD ma ọ bụ mmejọ nke ụfọdụ n'ime kọmputa. Ọ bụrụ na i nwere nsogbu ọ bụghị naanị na nbudata faịlụ, o yikarịrị ka ị ga-aga na ụlọ ọrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na diski ike, ị nwere ike ịlele ihe dị n'okpuru.
Gụkwuo: Otu esi arụzi diski ike
Nsogbu Windows. Ọ gaghị ekwe omume ikwu ihe ọ bụla dị na ebe a, ebe ọ bụ na enweghị ike ịga n'ihu na nbudata bụ naanị otu n'ime ihe mgbaàmà nkịtị nke nsogbu ahụ, ma eleghị anya ị ga-ahụ naanị site n'inyocha nnukwu foto ahụ. Anyị na-akwado gị ka ị mara onwe gị na ihe ndị na-akpata ya na freezes na otu esi edozie ha.
Gụkwuo: Kọmputa Windows gwụla
NKWUKWU faịlụ ndị na-adịghị ebuba data
Enwekwara nhọrọ mgbe, n'ihi na ọ nweghị ihe kpatara ya, faịlụ ahụ malitere ịpụta na ọkwa a na-amaghị ama (n'etiti ha, NTỤKWU), ndị aha ha nwere ihe odide na-abaghị uru. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke nsogbu abụọ siri ike.
Nke mbụ n'ime ha - onye ọrụ data ahụ adabaghị: draịvụ ike, SSD, USB flash drive ma ọ bụ CD. Mgbe mgbe, nsogbu ndị dị otú ahụ na-esonyere nsogbu ndị ọzọ: ọ dịghị ihe ọ bụla a ga-edegharị site na ụgbọelu ahụ, ọgakwaghị achọpụta ya site na OS, usoro ahụ na-egosi njehie ma ọ bụ na-aga "ihuenyo anụnụ anwụrụ ọnwụ," na ihe ndị ọzọ.
Ndabere na-adabere na ụdị nchekwa ngwaọrụ. N'ihe banyere windo ma ọ bụ CD / DVD, iṅomi faịlụ niile na kọmpụta na nhazi zuru ezu nwere ike inyere aka (kpachara anya, usoro a ga-ehichapu data na ngwaọrụ ahụ kpamkpam!). N'ihe banyere draịvụ ike ma ọ bụ SSD, o yikarịrị, ị ga-achọ onye nnọchi ma ọ bụ nleta ndị ọkachamara. Iji jide n'aka nke a, dịka ọ dị, lelee diski ike gị maka njehie.
Lelee draịva maka njehie na Windows
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na diski diski adịghị
Ihe ngosi nke abụọ nwere ike ịpụta akwụkwọ na Ngalaba ọzọ bụ ọrụ dịgasị iche iche nke software ọjọọ - nje virus, trojans, keyloggers zoro ezo, wdg. Mkpuchi nsogbu dị otú a doro anya - nyocha zuru ezu nke usoro ahụ na antivirus ma ọ bụ ihe ndị dị ka AVZ ma ọ bụ Dr. Web CureIT.
N'okota elu, anyị na-achọpụta na ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ike izute faịlụ dị ka IKPEHE. N'otu aka, ọ dị mkpa igosi ekele maka ọganihu nkà na ụzụ, nke na-enye ohere ịbawanye ọsọ nke njikọ na Ịntanetị, na n'aka nke ọzọ, ọrụ nke ndị na-emegide nje virus na ndị na-emepụta ndị na-ebu data, bụ nke na-eme ka ntụkwasị obi nke ngwaahịa ha mgbe nile.